माछामासु धेरै खाने बच्चामा मोटोपनको सम्भावना हुन्छ ? – Damauli Online News
माछामासु धेरै खाने बच्चामा मोटोपनको सम्भावना हुन्छ ?
२५ बैशाख २०७९, आईतवार ००:२०
काठमाडौं : हुन त हिजोआज माछामासु नखाने व्यक्ति कमै हुन्छन् । परिवारका सदस्य मांसाहारी भएपछि बालबालिकामा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने भइहाल्यो । शाकाहारी परिवारको संख्या पनि पछिल्लो समय उल्लेख्य छ । अन्य खानेकुरा जस्तै मासु र मासुजन्य खानेकुरा पनि स्वास्थ्यका लागि आवश्यक हुन्छ ।
वैज्ञानिकहरुको पछिल्लो अध्ययन अनुसार मांसाहारी बालबालिकाको तुलनामा शाकाहारी बालबालिकाको तौल कम हुने देखिएको छ । क्यानडाको टोरन्टोस्थित सिन्ट मिसेल्स हस्पिटलले गरेको सर्वेक्षणले मांसाहारी बालबालिकाको तुलनामा शाकाहारी बालबालिकाको तौल कम हुने सम्भावना ९४ प्रतिशतसम्म हुने बताएको छ ।
दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकामा गरिएको सर्वेक्षणले खानपानका कारण वजन कम र बढी हुने गरेको देखिएको हो ।
सर्वेक्षणमा ९ हजार बालबालिकालाई सहभागी गराइएको थियो । जसमा २५० जना शाकाहारी थिए । शाकाहारी बालबालिकाको उचाइ, बडी मास इन्डेक्सन र पोषणको मात्रा बराबर भए पनि शाकाहारी बालबालिका जत्तिकै थियो । तर उनीहरुको वजन भने मांसाहारी बालबालिकाको तुलनामा कम हुने सम्भावना ९४ प्रतिशतसम्म कम रहन सक्ने पाइयो ।
सर्वेक्षणमा सहभागी भएका ८ हजार ७ सय बालबालिकामध्ये ७८ प्रतिशतको वजन उमेर अनुसार सही रहेको पाइयो । शाकाहारी बालबालिकामा सही वजन हुने ७९ प्रतिशत थिए । उमेर अनुसारको वजन परीक्षण गर्दा मांसाहारीमा जम्मा तीन प्रतिशत बालबालिकाको वजन मात्रै कम रहेको पाइयो भने शाकाहारीको ६ प्रतिशत ।
यसैलाई आधार मानेर वैज्ञानिकले मांसाहारी बालबालिकाको तुलनामा शाकाहारी बालबालिकाको तौल न्यून हुने सम्भावना ९४ प्रतिशतसम्म रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
मांसाहारी बालबालिकामा मोटोपनको समस्या देखिने अध्ययनले बताएको छ । यसको कारण शाकाहारी खानामा न्युट्रेसनको कमी हुने गरेको पाइएको छ । अध्ययनले सबैभन्दा बढी शाकाहारी बालबालिका एसियामा रहेको उल्लेख गरेको छ । यसको कारण वजन कम हुने सम्भावना धेरै रहन्छ ।
अध्ययनमा संलग्न बालरोग विशेषज्ञ डा. जोनाथन मैगुरीले अमेरिका तथा भारतजस्ता देशमा बालबालिकाको विकासको सूचक फरक–फरक भएको बताएका छन् ।
जस्तै भारतजस्ता देशमा पाँच वर्षका बालबालिकाको तौल १७ किलो र उचाइ १०८ सेन्टिमिटर हुनुपर्छ भने अमेरिकामा तौल १८ किलो हुनुपर्छ ।
पोषणविद् डा. मनसा ठकुराठी बालबालिकामा प्रोटिनजन्य खानेकुराको कमी भएमा तौल कम हुने सम्भावना रहने बताउँछिन् ।
‘मांसाहारी बालबालिकाको तुलनामा शाकाहारीको तौल कम हुन्छ भन्ने कुरा बालबालिकाको खानपानमा भर पर्छ । प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाइने खानेकुरा खुवाउने गरेमा बालबालिकामा तौल कम हुने समस्या आउँदैन,’ ठकुराठी भन्छिन् ।
तौल बढ्न मांसपेशी र रगतको मात्रा बढ्नुपर्ने भएकाले स्वस्थ रहन सागसब्जी, गेडागुडी, दाल, दूध र दूधजन्य पदार्थहरुको सेवन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । बालबालिकामा मात्रै नभई हरेक शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारीको तुलनामा स्वस्थ रहने डा. ठकुराठीको भनाइ छ ।
‘प्रोटिनजन्य खानेकुराले शरीरको तौल बढाउँदैन, उचाइ बढाउन पनि मद्दत गर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘शरीरलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिनयुक्त खानेकुरा सेवन गरे स्वास्थ्यमा समस्या आउँदैन ।’